Tag: milo | Martech Zone
Antony mahatonga ny olona handao ny sarety fiantsenana
Alatsinainy, Aogositra 6, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Tsy hahatratra 100% ny varotra mihitsy ianao aorian'ny fampidiran'ny olona ny vokatra ao amin'ny kalesinao, saingy tsy misy isalasalana fa banga iray io mandalo vola io. Misy ny paikady hitaomana ny olona hiverina… anisan'izany ny fanoratana. Manaraka ny olona ny fampielezan-kevitra amin'ny dokam-barotra taorian'ny nandaozany ny sarety fiantsenana sy ny dokambarotra fanamarihana ho azy ireo rehefa mitsidika tranonkala hafa izy ireo. Ny fiverenana dia matetika tsara amin'ny fampielezana fanentanana. Na izany aza, aorian'izy ireo
Ny fiantraikan'ny hevitra an-tserasera
Zoma, Aprily 27, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Vao haingana izahay no nanomboka niara-niasa tamin'ny Angie ny List ary natao efa nisy maso fanokafam-taminay ny orinasa maro mahazo Leads alalan'ny naoty, hevitra sy ny efaha. Fa raharaham-barotra eo an-toerana izay manome ny mpanjifa amin'ny fanompoana lehibe, ny karama hevitra amin'ny Angie ny List madio fidiram-bola. Araka ny fandraharahana madinika Search Marketing Survey ny American Express Open, US orinasa madinika mbola afaka matoky ny teny-of-vava ho toy ny lalana ho ambony mpiantsena mba hahita azy ireo.
Torohevitra fiantsenana eo an-toerana amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra
Zoma, Desambra 9, 2011 Zoma, Desambra 9, 2011 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Nalefanay momba an'i Milo, fahazoana ny eBay. Ny tanjon'i Milo dia ny hananana ny vokatra rehetra amin'ny talantalana rehetra amin'ny tantara rehetra misy amin'ny Internet. Ary efa atosika sahady ny fivarotana antsinjarany amin'izao vanim-potoanan'ny fialantsasatra izao! Misy torohevitra tsara eto ary fotoana mety ho an'ireo mpivarotra antsinjarany hamenoana ny varotra ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitaterana ny fifamoivoizana mankany amin'ny fivarotany avy amin'ny Internet. Toa izao ny fotoana hanafananaana ny Jingle Bells sy ny cookies Gingerbread, ary manomboka mitondra fiara
Avoahy amin'ny Milo ny Inventory-nao an-tserasera
Alarobia, Novambra 16, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Tamin'ny herinandro lasa aho dia niresaka tamin'i Rob Eroh, izay mitantana ny ekipa mpamokatra vokatra sy injeniera ao Milo. Milo dia motera fikarohana any an-toerana izay tafiditra mivantana amin'ny Point of Sale (POS) na ny Resource Resource (ERP) an'ny mpivarotra. Io dia ahafahan'ny Milo ho motera fikarohana marina indrindra raha ny amin'ny famaritana ireo entana amin'ny lisitra ao amin'ny faritra misy anao. Ny tanjon'i Milo dia ny hananana ny vokatra rehetra amin'ny talantalana rehetra amin'ny tantara rehetra amin'ny Internet…
Miala amin'ny asa lehibe aho ary mitondra lohateny ho an'ny media sosialy
Sabotsy, Oktobra 4, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 4 minitra Ny taona lasa izay nandaniako an'i Patronpath dia fiakarana an-tsambo tsy mampino. Ny orinasa dia ao anaty fitomboan'ny fitomboana ary mahomby tokoa! Nahazo ny lokan'ny Techpoint Mira izahay. Nahavita ny fampivoarana fampidirana POS 4 izahay - Mikraoskazy, POSitouch, Comtrex ary Aloha. Nanamboatra ny interface ny mpampiasa izahay mba hampitomboana ny fiovam-po ho an'ny mpanjifanay. Nanampy fihenam-bidy sy fiarovana izahay amin'ny fampiharana. Nanipy tranokala misy ny Toeram-pisakafoanana aza izahay